Git 2.28 dị ebe a ma bịa na mgbanwe na njiri okwu na akụkọ ndị a | Site na Linux
Git 2.28 dị ebe a ma ọ na-abịa na mgbanwe na njiri okwu na akụkọ ndị a
Versiondị ọhụrụ nke Git 2.28 dị ebe a ma ọ na-abịa itinye ụfọdụ mgbanwe metụtara na okwu tinyere nke izu ndị gara aga o gosipụtara site na netwọkụ mmekọrịta nkwado ya na mkpebi ya iji mee mgbanwe na ngwa okwu ejirila ọtụtụ afọ.
Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere nke gara aga, sma nakweere mgbanwe 317 na ụdị ọhụrụ ahụ, kwadebere na nsonye nke ndị mmepe 58, nke 13 na-esonye na mmepe maka oge mbụ.
Maka ndị na-amaghị Git, ị kwesịrị ịma na nke a bụ otu n'ime usoro nchịkwa nsụgharị kachasị ewu ewu, nke a pụrụ ịdabere na ya, ma na-enye mgbanwe usoro ọrụ na-enweghị njikọ dabere na nsụgharị na njikọta.
1 Git 2.28 Key New Atụmatụ
2 Etu esi etinye Git 2.28 na Linux?
Git 2.28 Key New Atụmatụ
N'ime mgbanwe ndị metụtara mkpụrụokwu, njikọta nke nhazi init.defaultBranch ohuru iji kwe ka ịhọrọ aha nnabata aha aka ike.
Nhazi ahụ agbakwunyere maka oru ngo nke ndị mmepe ya chọrọ ịgbanwe okwu ahụ "nna ukwu". Maka akụkụ ha, GitLab na Bitbucket ejirila ụkpụrụ ndabara iji okwu bụ "isi" kama "nna ukwu" maka ngalaba ndị isi.
Na Git, dị ka tupu, na-agba ọsọ "git init" ndabara ọ na-aga n'ihu ịmepụta ngalaba "nna ukwu", mana aha a ugbu a enwere ike gbanwee. Dịka ọmụmaatụ, ịgbanwe aha ngalaba mbụ ka ọ bụrụ "isi ma ọ bụ isi".
Iji mee nke a, a na-atụ aro iji iwu ahụ:
git config –global init.defaultBranch isi
N'aka nke ozo anyi puru ichota nke ahu arụmọrụ optimiz gbakwunyere dabere na ọdịdị na ikwere eserese file format, nke ejiri ya iji bulie ohere ịnweta ozi na nkwa, nkwado maka oge ntoju Bloom, ihe omume puru iche nke na-enye ohere ịgha ụgha nke ihe na-efu, mana ewezuga ịhapụ ihe dị adị.
Nhazi a na - enye onye ọrụ ohere ị mee ngwa nyocha na akụkọ mgbanwe site na iji iwu «git log - "Ma ọ bụ" ụta ụta ".
Banyere protocol "ozi kpọtara / mmepụta oyiri", -ekwe omume na-agwa ndị ahịa site na ihe nkesa banyere mkpa ibudata na mbụ kwadebere ngwugwu faịlụ e emejuputa atumatu na mgbakwunye na nke ebunye juru n'ọnụ ihe data.
Na Ọrụ gara n'ihu na mgbanwe na SHA-256 hashing algorithm kama SHA-1.
Nke mgbanwe ndị ọzọ nke pụtara na ụdị ọhụrụ nke Git:
Iwu "ọnọdụ git" na-enye ozi gbasara ọganihu nke ọrụ mmepụta oyiri nke obere (obere ndenye ọpụpụ).
Maka iwu nke ezinụlọ "diff", a ga-atụpụta ntọala "diff.relative" ọhụrụ.
Inyocha “git fsck” na - enyochazi ọkwa ọkwa nke osisi ihe ahụ na - achọpụta ihe ndị a na - ekewabeghị.
Simplified interface iji dezie ihe ọmụma dị nro na nchọta mmepụta.
Agbakwunyere nkwado maka ịmecha nhọrọ na iwu "git switch" na akwụkwọ edemede akpaaka.
Agbakwunyere nkwado maka ịgbagha arụmụka na nkọwa dị iche iche na "git diff" ("git diff A..BC", "git diff A..BC ... D", wdg).
Iwu "git fast-export -anonymize" na-agbakwunye ikike ịhazi ihe osise nke gị iji kechie mbupute maka mbibi dị mfe.
Na "git gui" ọ ga-ekwe omume imepe osisi na-arụ ọrụ site na mkparịta ụka mbụ.
Finalmente ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, Nwere ike ịlele nkọwa site na ịga na ọkwa ọkwa na weebụsaịtị Git na ngalaba ọkwa ya.
Etu esi etinye Git 2.28 na Linux?
N'ikpeazụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ imelite ma ọ bụ wụnye ngwa ọrụ ahụ Naanị anyị ga-emepe ọnụ na sistemụ anyị ma tinye ya otu n'ime iwu ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Git 2.28 dị ebe a ma ọ na-abịa na mgbanwe na njiri okwu na akụkọ ndị a
Linux 5.8: nke kachasị na akụkọ ihe mere eme nke Linux ewepụtarala
GTK 3.99 dị ebe a na otu nzọ ụkwụ na GTK 4, mara mgbanwe ya kachasị mkpa